Dibadbaxyo Waa Weyn Oo Ka Socda Dalka Algiers – somalilandtoday.com
Dibadbaxyo Waa Weyn Oo Ka Socda Dalka Algiers
(SLT-Algiers)-Kumanaan dibad-baxayaal ah ayaa isugu yimid badhtamaha magaalada Algiers ee caasimadda dalka Algeria, si ay u kordhiyaan cadaadiska ay ku dalbanayaan inuu is-casilo madaxweyne Abdel Aziz Bouteflika, maalin kadib markii milatariga awoodda badan ee dalka uu ku baaqay inuu xilka ka dego.
Madaxa shaqaalaha ciidamada, Jeneral Ahmed Gaed Salah ayaa salaasadii weydiistay golaha dastuurka inuu go’aan ka gaadho in 82 jirkan xanuunsanaya uu ku habboon yahay inuu xafiiska sii hayo iyo in kale.
Bouteflika, oo wajahaya xasaradihii ugu ballaarnaa 20-kii sano ee uu xukunka hayey, ayaa ku guul-darreystay inuu dejiyo dadka Algeria kadib markii uu ka tanaasulay inuu mar shanaad xilka madaxweynaha isku soo taago.
“Cadaadiska waddooyinka waa socon doonaa inta nidaamkan uu ka baxayo” waxaa sidaas yidhi Mohamed Djemai oo ah arday 25 jir ah.
Dibad-baxayaasha ayaa wata damac aad u weyn. Waxay doonayaan inay afgambiyaan dhammaan nidaamka siyaasadeed ee iminka, kuna beddelaan jiil cusub oo hogaamiyeyaal ah, kuwaas oo awood u leh inay casriyeeyaan dalkan ku tiirsan wax soo saarka saliidda, ayna abuuran nolol k aka wanaagsan tan iminka.